राष्ट्रपतिदेखि प्रदेश प्रमुखसम्म कसको तलब कति ? - Movies Trends
काठमाडौँ । निर्वाचित भएको ६ महिना बित्दा पनि स्थानीय तहका प्रतिनिीधले सेवा–सुविधा पाउन सकेका छैनन्। प्रदेश सरकारले बनाएको कानुनबमोजिम स्थानीय तहका प्रतिनिधिको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा निर्धारण हुने व्यवस्था छ।
यस्ता पासवर्ड राख्नुभएको छ ? तुरुन्तै बदल्नुहोस्